Mohamed Amin: Carruur badan baa saboolnimo ku sugan Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mohamed Amin: Carruur badan baa saboolnimo ku sugan Sweden
La daabacay torsdag 14 april 2016 kl 15.51
Mohamed Amin: Xaafadahan carruurta xaqooda ma helaan
Foto: David Nilsson Hamne/Sveriges Radio.
Sweden ayaa ku liidataa gacanqabashada carruurta ku sugan heerka ugu hooseysa bulshada ee saboolnimo, sidaa waxay ka muuqatay isku-barbardhig lagu sameeyey waddamada EU kamid ah iyo kuwa kale ee ku jira ururka waddamada horumaray OECD laysku yiraahdo.
Daraasadda Unicef waxaa lagu eegay farqiga u dhaxeeya carruurta Sweden dhanka dhaqaalaha, caafimaadka, tacliinta iyo weliba wanaagooda kale.
Liiskan Unicef ayey Sweden ka gashay qaybta ugu denbeysa iyadoo Sweden ay ka hormareen waddamada ku yaala Baltikum, bariga Yurub, Geriiga iyo weliba Mareykanka.
Caruuraha hal waalid koriyo iyo carruurta ajaanibta dhaleen ayaa ka mid ah kuwa dhanka dhaqaalaha ugu liita waddanka Sweden, sida lagu sheegay daraasadda Unicef.
Laakiin Mohamed Amin Barqadle oo ka howl-gala ururka badbaadada carruurta (Rädda Barnen) laan uu ku leeyahay xaafaddaha Södra Järva ayaa sheegay in warka Unicef aheyn mid cusub, Rädaa Barnen ay horey u sheegtay in ay carruur badan Sweden ku suganyahiin xaalad saboolnimo ah.
- Arrin aan filaneynay weeye, wax cusub ma ahan. Annaga hey’adda badbaadinta carruurta warbaxino badan ayaa soo saarnay tobankii sanno ee u denbeeyey. Warbaxinadas oo sannad weliba ay ku xusneyd in carruurta degan xaafaddaha dhanka dhaqaale iyo bulshoba ildaran in saboolnimo ay carruurta ku heysato.
Iswiidhan oo dhaleecayn loo gudbiyay
torsdag 14 april 2016 kl 10.45